मुख्यमन्त्रीद्वारा वार्ताको निम्तोः पहाड़का सबै दलले गरे ठाड़ै विरोध – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsमुख्यमन्त्रीद्वारा वार्ताको निम्तोः पहाड़का सबै दलले गरे ठाड़ै विरोध
दार्जीलिङः राज्य सरकारसित वार्ता गर्ने औचित्य पनि छैन अनि आवश्यकता पनि। यसैले गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा राज्य सरकारसित वार्ता गर्ने कुनै प्रश्‍ननै आउँदैन। यदि वार्ता गर्नु हो भने केन्द्र सरकारसित वार्ता गरिनेछ अनि त्यो पनि केवल अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको एकमात्र मुद्दामा।
राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले पहाड़का सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीहरुलाई वार्ताको लागि दिएको निमन्त्रणालाई ठाड़ै विरोध जनाउँदै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (क्रामाकपा)-ले आज यस्तो मत प्रकट गरेका हुन्। शुक्रबार र शनिबारका दिन सोनादा, दार्जीलिङ शहर अनि सिंहमारी क्षेत्रमा भएको पुलिस अनि जनतामाझको झड़पबीच पुलिसको गोली लागेर तीनजनाको विभत्स मृत्यु भएपछि राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले पहाड़मा शान्ति बनाउने अपील गर्दै पहाड़का सबै पार्टीहरुलाई वार्ताको लागि मीडियामार्फत निमन्त्रणा दिएकी थिइन्।
यसलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले सोझै अस्वीकार गरेका छन्। यसबारे गोजमुमो सहसचिव विनय तामाङसित सोध्दा उनले प्रथम वाक्यनै राज्य सरकार अनि राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसित वार्ता हुुँदै हुँदैन भने। मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले पहाड़मा जस्तो निरङ्कुश शासन चलाइरहेकी छन्, यसलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले कदापि स्वीकार गर्दैन।
पुलिसले लगातार गोर्खाल्यान्ड समर्थकहरुको हत्या गरिरहेको छ, अर्कोतर्फ पहाड़ बन्द नखोलिएसम्म पहाड़मा राशिन पठाउँदिनँ भन्ने पनि चेताउनी दिइरहेकी छन्। एकतर्फ मुख्यमन्त्रीले अशान्ति मच्चाउँदैछिन्, अर्कोतर्फ शान्तिको लागि अपील गरिरहेकी छन्। उनको यस्तो दोधारे नीतिलाई गोर्खा समुदायले बुझिसकेका छन्। यसैले शान्तिको लागि राज्य सरकारले वार्ता बोलाउँछ भने पनि पहाड़को कुनै राजनैतिक दलले भाग लिनेछैन। यदि वार्तानै हुन्छ भने केन्द्र सरकारसित हुनेछ, त्यो पनि केवल एकमात्र अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि, उनले स्पष्ट शब्दमा भने। पहाड़ बन्द नखोलिएसम्म पहाड़मा राशिन नपठाउने मुख्यमन्त्रीको घोषणाको उनले कठोर शब्दमा आलोचना गर्दै यस विषयमा मुख्यमन्त्री विरूद्ध मुद्दा दर्ता हुनपर्ने माग गरेका छन्।
अपराध गरेर जेलमा कैदी हुनेहरुलाई पनि सरकारले पर्याप्त खानाको व्यवस्था गरिदिन्छ भने आफ्नो संवैधानिक अलग राज्यको मागमा आन्दोलनरत बनेका जनतालाई राशिन नदिने उनको बयान पूर्णरूपले असंवैधानिक हो, यसैले उनी विरूद्ध मुद्दा दर्ता हुनपर्छ। एकतर्फ वार्ताको लागि पनि बोलाउने, अर्कोतर्फ राशिन पनि आउन नदिने उनको धम्कीबाट उनको दुइमुखे चरित्र उदाङ्गो हुन्छ। यसरीनै गोरामुमो प्रवक्ता निरज जिम्बाले पनि राज्य सरकारसित वार्ता हुनै नसक्ने बताउँदै भने-राज्य सरकारसित वार्ता गर्ने न माहौल छ, न औचित्यनै। यति मात्रै होइन, गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको विषय राज्य सरकारको सब्जेक्ट पनि होइन।
यसैले राज्य सरकारसित वार्ता गरिरहने कुनै आवश्यकतानै छैन। उनले राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीमाथ कटाक्ष प्रहार गर्दै भने-गान्धीको देश भारतको पश्‍चिम बंगाल राज्य अहिले गान्धीको साटो किम जोङ उन्-को नर्थ कोरिया जस्तो भएको छ। राज्यकी मुख्यमन्त्री व्यानर्जीले पुलिस प्रमुख जस्तो बनेर गोर्खा जातिको अस्मिताको मागमा उठेको गोर्खाल्यान्डको मागलाई कुल्चिने प्रयास गरिरहेकी छन्। दार्जीलिङ पहाड़मा अहिले जे-जति अशान्ति, हिंसाका घट्नाहरु भइरहेका छन्, यसको उत्पत्ति मुख्यमन्त्रीलेनै गरेकी छन्।
यसैकारण पहाड़मा शान्ति बहाल गर्न उनीसित वार्ता गर्ने प्रश्‍ननै आउँदैन। राज्य सरकारको अमानवीय दुर्नीतिको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ, अब मुख्यमन्त्रीले आफ्नो आँखा खोल्नुपर्छ अनि गोर्खा जातिमाथि अत्याचार गर्न बन्द गर्नुपर्छ। उनले भने-इन्टरनेट सेवामाथि प्रतिबन्ध लगाएर राज्य सरकारले मीडियाको स्वतन्त्रता पनि हनन गरेको छ। यस विरूद्ध पार्टीको तर्फबाट आवश्यक कानूनी कार्वाहीको लागि पनि पहल गरिरहेको उनले जानकारी गराए। उनले सोनादा अनि दार्जीलिङमा भएका गोलीकाण्डको विरोध जनाउँदै भने-सोनादा र दार्जीलिङ इलाकामा न 144 धारा लागू गरिएको थियो, न अशान्त घोषित क्षेत्रनै थियो।
तर निहत्था युवाहरुमाथि गोली चलाउने के आवश्यकता पर्यो? उनले प्रश्‍न गरे। यसरीनै क्रामाकपाको युवा एकाई गणतान्त्रिक क्रान्तिकारी युवा मोर्चाका महासचिव अरूण घतानीले पनि राज्य सरकारसित वार्ता कसरी हुनसक्छ? भन्ने प्रश्‍न गर्दै जुन सरकारले पहाड़का जनतालाई कुकुर-बिरालो जस्तो पनि सोंचेको छैन, त्यो सरकारसित वार्ता गरेर कुनै समस्या सामधान हुन्छ भन्ने सोंच्नु पनि नहुने बताए। राज्य सरकारसित होइन, केन्द्र सरकारसितनै वार्ता भए पहाड़को समस्या समाधान भएर जानेछ।
तृणमूल कार्यकारी अध्यक्षले दिए पार्टीबाट राजिनामाः गोर्खाल्याण्डको निम्ति छाती थाप्छु-तामाङ